Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga Mucaaradka Blue Party oo Maanta Mudaaharaad Balaadhan Kuqabtay Addiss Ababa Iyo Ciidanka Amaanka oo Hor Istaagay.
Xisbiga Mucaaradka Blue Party oo Maanta Mudaaharaad Balaadhan Kuqabtay Addiss Ababa Iyo Ciidanka Amaanka oo Hor Istaagay.
Waxaa manta kadhacay Caasimada wadanka Itoobiya ee Addiss Ababa mudaaharaad balaadhan ooy soo qaban qaabiyeen xisbiga mucaaradka ah ee Blue Party (Samayawi Party).
Mudaaharaadkan oo ahaa mid balaadhan ooy kasoo qaybgaleen shacab aad ufaro badan ayaa maanta gilgilay caasimada Gumaysiga Itoobiya ee Addiss Ababa. Waxayna codsadeen kaqaybgaleyaashii mudaaharaadka isbadal balaadhan in lagu sameeyo Arimaha Siyaasada, Dhaqaalaha iyo Bulshada ee Gumaysiga Itoobiya ka,arimiya.
Dadkii mudaaharaadkan iskugu soobaxay oo rabay inay socod kusoo maraan meesha layiraahdo Meskel Square ayaa waxaa hor istaagay ciidanka nabad sugida TPLF iyagoo udiiday kaqaybgaleyaashii mudaaharaadka inay socdaalkoodii siiwataan.
Dadkii mudaaharaadkan soo qaban qaabiyay ayaa codsanaya in lasii daayo dhamaan maxaabiista siyaasadeed ee xabsiyada wadanka kabuuxa een xataa waligood maxkamad lahorkeenin, waxaa kale ooy aad ooga cabanayaan cadaadiska joogtada ah ee laguhayo.
Wadanka Itoobiya ayaysan gaba ahaanba kajirin Xoriyatul-Qawl ka iyo inay muwaadiniintu si madax banaan umuujiyaan dareenkooda iyo rabitaankooda. Waxaa lawada ogsoon yahay inay mudooyinkii lasoo dhaafay jilgileen mudaharaadyo isbada jog ah ooy soo abaabuleen Muslimiinta Itoobiya oo diidanaa kana soo horjeestay cabudhinta iyo kutumashada xuquuqda aadamaha eey Maamulka TPLF ay kuhayaan shacabka kudhaqan wadanka Itoobiya.
Dhanka kale waxaa maalmihii lasoo dhaafay kadhacay caasimada Gobolka Wallo ee Dasse iyo magaalada Goojaam qarax khasaare balaadhan gaystay. Qaraxyadan iyo mudaaharaadyadan ayaa kusoo beegmaya xili ay kala qaybsan yihiin madaxda xisbiga TPLF ee dulmiga iyo cadaalad darida kuhaystay dalka Itoobiya 22-sano ee lasoo dhaafay.
Siduu mudaaharaadku udhacay oo maqal iyo muuqaal ah waxaad kadaawan kartaan meeshan hoose.